မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: April 2009
Well, Its Level5Now (Swine Flu)
ဒါပေမယ့် H1N1 သေနှုန်းကတော့ ငှက်တုပ်ကွေးလောက် မပြင်းဘူးလို့ကြားမိပါတယ်။ အရမ်းမဆိုးရွားသွားလောက်ဘူး ထင်ရပါတယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, April 30, 20092comments
H1N1 ပျံ့နှံ့မှု အခြေအနေ
# Picture taken from http://www.healthmap.org/en which is using Google Maps.
တကယျသာ လူလူခွငျး လထေဲက ကူးတယျဆိုရငျ ၃လအတှငျး တကမ်ဘာလုံး လူတဈဝကျလာကျေ လာ့သြှေားနိုငျတယျ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, April 29, 20095comments
ဝက်တုပ်ကွေး Phase3မှ Phase4အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပုံပေါ်
အဆင့် ၆ဆင့်ရှိပြီး ၄ ဟာ နိုင်ငံတစ်ခုကတစ်ခု အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်နိုင်တယ်လို့လဲရေးထားပါတယ်။
နောက်ပြီး verified human-to-human transmission လူလူခြင်းကူးနိုင်တယ်လို့လဲ ဆိုထားပါတယ်။
ယုံတာမယုံတာတော့ its up to you :-)
for me I still dont care :D
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, April 28, 20094comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 25, 20090comments
မက်ကဆီကို အခြို့နရောမြားတှငျ ဖွဈပှားခွငျးတှ့ရေိ (ဧပွီလ ၂၅ရကျ)
၈၈၂မုခနျ့ဖွဈပှား။ ၆၂ယာကျေသေ။ အဲဒီအထဲက ၉ယာကျေကို ဝကျတုတျကှးလေို့ စဈဆးဆေုံးဖွတျထား။
ကနျြာပေုံမနျဆိုရငျ သိပျအလးမေထားတတျပါဘူး။ ဒီလိုသတငျးမြိုးကို။ :D
ဒါပမေယျ့ ဘာလို့လဲမသိဘူး ဂပြနျအစိုးက တျာတျောသေတိထားတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့တဈလလာကျေက ကုမ်ပဏီမာ လူလူခွငျးကူးနိုငျတဲ့ ငကျတုပျကှးဖွေဈပှားခဲ့ရငျ ဘာတှေ ဘယျလိုလုပျရမယျ၊ အလုပျသှားရငျ ဘယျလိုသတိထားရမယျ။ အိမျနားပတျဝနျးကငျြးထှကျရငျ ဘယျလိုသတိထားရမယျ။ ဆိုးလာရငျ အလုပျပါ ဆိုငျးထားပွီး။ ကာကှယျဆးထေုတျတာကို ၃လခနျ့ စာငျေ့ရမယျ၊ ကာကှယျဆးကေ ပိုးကို မတှ့မေခွငျးထုတျလို့မရဘူး။ စတာတှကေို အထကျလူကွီးမြားမ တဈဆငျ့ ကွားသိရပါတယျ။
ကဲ။ ဘာလုပျကွမလဲ။ :P
Compile Once, Write Once, Enjoy Everytime!
Write Once Compile Anywhere, I love C/C++!
Write Once Run Anywhere, I love Python!
I love C/C++ and Python Bridge Programming, Its the best of the best!
Write Best & Fastest Code with C/C++ and
Run as Prettiest & Lightest Python Codes, Its Extremely Great! :D
Compile Once, Write Once, Enjoy Everytime :-)
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, April 23, 20097comments
ကဏဿဍ : My Thoughts
Memo# Py_Unicode Object & wchar_t
- Py_UNICODE isatypedef alias for either unsigned short (UCS2) or unsigned long (UCS4).
- UCS2 and UCS4 Python builds are not binary compatible.
To compile Python with UCS4,
wchar_t is unsigned long (32 bits,4bytes)
wchar_t is unsigned short (16 bits,2bytes)
If you use wchar_t C/C++ in codes and when need to convert to Py_Unicode, your python need to be UCS4 binary.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, April 23, 20090comments
ကဏဿဍ : C|C++, Memo, Python|Ruby, Tips
F# (.NET Platform based Functional Programming)
Seems nice, since I like the Languages. :-)
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, April 21, 20090comments
ကဏဿဍ : Programming
Crawling the blog html content with python (direct HTML read method, not through RSS)
f = urllib2.urlopen('http://www.soemin.net/2009/04/font-encoding-detection-for-zawgyi-and.html')
#its also convert #&4096; to က
results will be like this
ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ် ၅.၁ ခွဲခြားခြင်း (Font Encoding Detection for Zawgyi and Unicode 5.1)
၁။ သဝေထိုး၊ ရရစ်၊ ရပင်းစတာတွေ နဲ့
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 18, 20090comments
ကဏဿဍ : Blog, Programming, Python|Ruby, Tips
ဆိုကရေးတီး The Hardcore Assembly Programmer
အရစဿစတိုတယ်လ် The Influential C Programmer
ပလေတို The Idealistic C++ Evangelist
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 18, 20093comments
အာငျေမွငျမုရဲ့ အဓိကသာ့ခေကျြဟာ ဘယျသူမမတှ့ရေိဘူးတဲ့အရာကို ရာဖှခွေငျးပငျဖွဈသညျ။
သူမြားမလုပျတာကို လုပျခွငျးသညျ အာငျေမွငျမု အတှကျ အခှငျ့အလမျးရိသညျ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 11, 20092comments
ကဏဿဍ : Quotes
ကံကာငျေးမုဆိုတာ မိမိကိုယျကိုယျတိုငျ ရယူမ ရမယျ့အရာဖွဈတယျ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 11, 20090comments
Yay! Almost success Zawgyi to Unicode 5.1 and Unicode 5.1 to Zawgyi Converter in Pure C with 60MB+/s
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, April 07, 20090comments
ကဏဿဍ : C|C++, Programming, Research, Unicode
North Korea Launched Satellite (so-called)
I thought North Korea is just like Myanmar, But its not. Level is different.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, April 05, 20093comments
Zawgyi Normalization Program
- extract and run normalize.exe test.txt6in command line (Command Prompt).
(6 is zawgyi for this exe file)
- Input file must be UTF8 encoded text file
- outfile will be test.out
Able to fix the following things
မောင် ကို ကို၏၏၏၏၏၏၏။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
မြကြခြ  ကြကြိ ကြွ ကြွိ ခြ ခြွ ခြိ ခြွိ ခြ  ခြွ  ခြိ   ခြွီ
and result will be like this.
မောင် ကို ကို၏။
Here is my license
- Cannot be used in Commercial related programs, applications, anything , related with commercial things
- Must be credit to me, if you use and put your data or program online.
ကဏဿဍ : Burglish, NLP, Programming, Python|Ruby, Research, Unicode
Burglish Update v1.9.2
updates for unicode 5.1 direct input layout (typewriter input)
In Unicode 5.1, သဝေထိုး and ရရစ် need to store after consonent(က-အ), like this က, ကေ
But from user side, most people want to type ဩဝေထိုး first.
so, i reorder the input sequence after you type in burglish test area.
when you type ကေ, it will automatically fix က, and ကြေ to က , if you have proper unicode 5.1 font(Myanmar3,Padauk,Parabaik) and render engine (eg. latest uniscribe), you will not see like this ကြ , you will instead see, ကြ
for မြောင်, you need to type မောငြ်. it will properly convert to unicode 5.1 compatible one မာငြေ်.
and few others update.
Zawgyi's some useful shortcuts like,
Shift Q -ျှ
Shift W -ျွှ
Shift E -ျွ
Shift K -ှု
can also type in Unicode 5.1 (Myanmar3) through Burglish Test Engine
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, April 05, 20090comments
amortization , -ise
>>> [re.sub(r,"\_\_1",INPUT),re.sub(r,lambda x:x.group(1).replace("iz","is"),INPUT]
I am writing dictionary parser from HTML files lately, for few weeks.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, April 04, 20092comments
ကဏဿဍ : My Thoughts, Programming, Python|Ruby, Regex, Tips
Waitzar Input System အသုံးပြုနည်း
Download waitzar here. http://code.google.com/p/waitzar/ ItsaWindows Client by Seth Hetu.
Thats Fantastic work! Thanks Seth, Cheers.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Friday, April 03, 20092comments
sh int Serial0/0/0.1/1/1/1:0.1
Oops!, its just too long
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, April 01, 20090comments
ကဏဿဍ : Cisco
ဝက်တုပ်ကွေး Phase3မှ Phase4အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေ...
Crawling the blog html content with python (direct...